Toerana filokana romanianina an-tserasera - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(235 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Ny karazana filokana rehetra any Romania ankehitriny dia ara-dalàna sy be mpampiasa. Ny firenena dia manana tantara maharitra filokana ara-dalàna hatramin'ny 1906, rehefa noforonina ny National Lottery Lottery Romana. Nandritra ny fitondrana jadona kominista notarihin'i Nicolae Ceausescu dia nambara fa tsy ara-dalàna, saingy tamin'ny 1990 dia niongana ny fitondrana ary lasa ara-dalàna indray ny filokana. Ny casino voalohany tao Romania aorian'ny kaominista dia nisokatra tamin'ny 1991.
Androany any Romania, dia manana trano filokana mihoatra ny 20, ary milina slot mihoatra ny 20,000, izay miorina amin'ny foibe fiantsenana, kafe sy toerana ho an'ny besinimaro manerana ny firenena. Ara-dalàna tanteraka koa ny filokana ara-panatanjahantena, ary any amin'ny ankamaroan'ny tanàna romana lehibe, dia afaka mahita mpamaky boky misy tsatoka avo ianao. Matotra haingana ny kolontsain'ny filokana ao Romania, efa mandroso ny indostria ankehitriny.
Lalao an-tserasera amin'ny fiteny Romania
Ny filokana an-tserasera any Romania dia vao haingana no lasa ara-dalàna tamin'ny fananganana ny National Agency for gaming (National Gaming Office) 4 aprily 2013. Talohan'io dia niloka ara-teknika ny filokana an-tserasera nanomboka ny taona 2010, rehefa nolaniana ny lalàna, mba hanala-dalàna ireo tranonkala filokana amin'ny Internet , manana fahazoan-dàlana ho an'ny fanjakana. Saingy, raha tsy misy ny fahefana mifehy ary mifanaraka amin'ny lalàna momba ny lalao filokana amin'ny Internet any Romania, dia tsy afaka nangataka ny mpandraharaha.
Androany ao amin'ny firenena dia misy trano filokana vahiny be dia be ho an'ny Romanianina. Mariho fa tsy misy amin'ireo mpandraharaha eo an-toerana no mbola tsy nahazo fahazoan-dàlana tamin'ny taona 2014. Malaza ihany koa ireo mpamaky boky an-tserasera any Romania, fa ny mpandraharaha vahiny lehibe indrindra tsy manana lisansa romanianina.
Lisitry ny Top Sites 10 Romanian Casino Sites
Romania - ny Ranomasina Mainty dia toerana mahafinaritra, lohasaha majika ao Danube, farihy maro ary tendrombohitra mahafinaritra, fanahin'ny romantista sy angano mistika. Fa na ny mpandeha aza dia misokatra ny safidy rehetra raha resaka filokana, satria avela eto amin'ny firenena izy ireo ary aseho amin'ny karazany rehetra. CasinoToplists nalefa tany Bucarest hahafantatra ny indostrian'ny filokana romana.
Romania - izay misy tantara kely ihany koa;
Fepetra henjana ho an'ny orinasa kazinina.
Ny casino malaza indrindra any Romania:
Gambling an-tserasera: dia ara-dalàna ny fahazoan-dàlana alàlana amin'ny tompona na vahiny;
Dimanjato dimy any Romania ao Bucarest miaraka amin'ny adiresin'ny renivohitra;
Zava-baovao mahavariana momba an'i Romania sy romanianina.
Toe-toerana Romania sy tantara ara-tantara fohy
Any atsimo atsinanan'i Eropa no misy an'i Romania. Androany dia repoblika parlemantera notarihin'ny filoha Klaus Johannis sy ny praiminisitra Victor Ponta. Ny renivohitry ny firenena dia ny tanànan'i Bucharest taloha.
Ny tanin'i Romania dia nonenan'i Cro-Magnon 42 000 taona lasa izay. Nandritra ny Fanjakana Romanina dia tany noforonina ny tany. Raha ny fanazavana, ny anarana maoderina dia nadika hoe "Roman".
Tamin'ny vanim-potoana antenantenan'i Romania dia i Tranifornia, i Moldavia ary i Wallachia. Vokatry ny fifanolanana tany amin'ny faritany tamin'ny vanim-potoana samihafa dia anisan'ny Fanjakana Hongroà sy ny Fanjakana Ottoman.
Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XIX dia lasa fetra efa misy ny fanjakana any Romania. Tamin'ny taonjato faha-1989 vao nifarana ny fananganana. Taorian'ny Revolisiona romana tamin'ny XNUMX dia nanomboka dingana vaovao teo amin'ny tantara.
Hatramin'ny 2004 Romania dia mpikambana ao amin'ny OTAN, ary hatramin'ny 2007 - mpikambana ao amin'ny EU.
Casino sy filokana any Romania
Ny tantara maoderina filokana ao Romania dia nanomboka tamin'ny taona 1990. Taorian'ny fanonganana an'i Ceausescu, niverina tany amin'ny sehatry ny filokana ny firenena. Na dia tsy nisy lalàna mifehy aza tamin'ny voalohany dia nanomboka nipoitra izy ireo tamin'ny 1991 tamin'ny fahatongavan'ilay orinasa Casino Aistria Austrian izay namorona ny casino lehibe voalohany teto an-drenivohitra.
Tamin'ny 1992 dia niseho tao amin'ny Gaming Commission izy, izay nanaraka ny asan'ireo orinasa filokana rehetra. Tamin'ny taona 1993 dia noraisiny ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny trano filokana. Nahazo laza be ny asa filokana ka ny governemanta romana dia nampiditra fahazoan-dàlana faneriterena tamin'ny taona 1998. Izany rehetra izany dia voalaza ao amin'ny lalàna momba ny lalàna mifehy ny filokana.
Hatramin'ny 1999, ny tompon'ny casino dia takiana ny hanaraka ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana, ny fandaminana ny casino amin'ny trano samihafa, hotel complexes na tsy mahatanteraka ny asa mivantana ataon'ireo sinema.
Tany Romania, dia navela hiteny ny filokana maromaro:
lalao eo amin'ny latabatra: poker, canasta, baccarat, blackjack, roulette, Punto Blanco;
Betting: wagering, betting bets;
lalao mampiasa Internet sy telefaonina.
Hentitra ho an'ny mpikarakara fialamboly filokana ny lalàna. Azafady mba jereo ny rafitry ny efitrano, isan'ny fotodrafitrasa fanampiana, birao, lalao makiazy sns. Ny fahazoan-dàlana dia tsy alaina amin'ny asa aman-draharaha ihany, fa koa nahazo alalana amin'ny milina filalaovana tsirairay. Matetika, fahazoan-dàlana manan-kery mandritra ny fotoana iray
1-5 taona. Aorian'ireo daty ireo dia mila zahana indray ianao ary mividy fahazoan-dàlana vaovao.
Ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa filokana dia farito ny fetran'ny taona, ohatra, ho an'ny mpitantana - hatramin'ny 23 taona. Misy karazana fandrarana mifandraika amin'ny firaketana heloka bevava na asa eo amin'ny asam-panjakana.
Alohan'ny hanokafana ny casino dia ilaina ny manangana tahirim-bola antoka. Isaina tsirairay izy io.
Any Romania, trano filokana marobe izay mahafeno fenitra iraisam-pirenena. Azo antoka fa iray amin'ireo tsara indrindra raisina ho toy ny gadona Casino Olympika. Ahitana andrim-panjakana 9, izay mampiasa olona 3000 eo ho eo. Tambajotra - mpikambana feno ao amin'ny Association Casino Eropa. Ny vahiny dia mahazo ny fepetra tsara indrindra hilalaovana ny filokana nentim-paharazana.
Casino Bucharest - iray amin'ireo trano filokana malaza indrindra ao Bucharest, izay saika eo afovoan-tanàna ao amin'ny hotely Intercontinental Hotel misy kintana 5. Trano fandraisam-bahiny ny trano fisakafoanana: atitany tsy misy kilema, serivisy voaofana tsara, sakafo tena tsara - izay ilainao fotsiny amin'ny lalao milay. Ao amin'ny latabatra fiasana Casino Bucharest 14 miaraka amin'ny lalao latabatra 4 misy blackjack, latabatra roulette 7.
Mirage Casino - trano filokana metropolitan iray hafa miasa nanomboka ny taona 2003. Any akaikin'ny hotely Ambassador Hotel ao amin'ny Magheru Boulevard no misy azy. Manana toerana 1000 ny efitrano malalaka, misy efitrano VIP roa. Misy latabatra kilalao 12, ary afaka miloka manomboka amin'ny 1 euro ianao.
Havana Princess Casino dia eo afovoan-tanàna, manana kianja 1200. Ny andrim-panjakana dia mampiasa matihanina voaofana tsara, manompo latabatra 12 amin'ny lalao. Ny casino dia mifantoka amin'ireo mpitsidika vahiny, izay ataon'ny mpitsangatsangana avy any Shina sy Torkia indrindra eto.
Casinos amin'ny aterineto any Romania
Misavoritaka ny tantaran'ny trano filokana an-tserasera eto Romania. Na dia amin'ny 2015 aza no avela amin'ny fomba ofisialy ny filokana virtoaly, ny mpizara romanianina dia efa niasa hatramin'ny ela ny tranonkala filalaovana. Isan-taona amin'ny teti-bola dia nitentina hatramin'ny antsasaky ny lavitrisa euro.
Notsaraina ara-dalàna ny filokana an-tserasera nanomboka tamin'ny 2009, isan-taona, nanolotra faktiora vaovao. Saingy ny tsy fahampian'ny teti-bola tamin'ny 2014 no nanery ny governemanta hanao ara-dalàna ihany tamin'ny farany. Ankehitriny, amin'ny faritanin'i Romania dia afaka milalao malalaka amin'ny tranonkala filokana tianao.
Ireo mpizahatany ao Bucarest
Romanian Athenaeum . Adiresy: Strada Benjamin Franklin 1-3, Bucureşti. Ity dia efitrano fanaovana fampisehoana mahafinaritra ao amin'ny firenena, izay antsoina matetika hoe fon'ny Bucharest. Ny tranobe dia natsangana tamin'ny taona 1888 tamin'ny endriny neo-classical miaraka amin'ny singa eclecticism. Ny atin'ny haitraitra sy harena manokana.
Paladin'ny Parlemanta . Adiresy: Strada Izvor 2-4, Bucureşti. Toro-marika eo amin'ny havoana Spiro - ohatra tsara indrindra amin'ny fotoana sosialista, miakatra ambonin'i Bucarest amin'ny 86 metatra, ary miala amin'ny 92 metatra ny tany.
National Village Museum . Adiresy: Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30, Bucureşti 011347. Nanangona trano 272 avy any amin'ny faritra samihafa amin'ny firenena ny any ivelany.
Tranom-bakoky ny zavakanto any Romania . Adiresy: 49-53, Calea Victoriei, 010063 Bucureşti. Ny tranombakoka lehibe indrindra amin'ny zavakanto eropeana sy romana misy fampirantiana 3,000 ary reservistana 60,000.
Herăstrău Park . Adiresy: Sector 1, Bucureşti. Niorina tamin'ny 1936 tao amin'ny zaridainan'ny farihy eponymous hita any amin'ny faritra avaratry Bucharest.
Zava-baovao mahaliana momba an'i Romania sy ny Romaniana
Nantsoina hoe Little Paris avy any atsinanana i Bucarest.
Bran Castle dia natsangana tamin'ny taonjato XIV - ny toerana fizahan-tany malaza indrindra ao amin'ny firenena, satria heverina ho ny anarany Count Dracula.
Manana ny fetin'ny fahaleovan-tena i Romania - 9 Mey. Saingy tsy andron'ny fandresena amin'ny Ady lehibe faharoa, andro fahalalahana tamin'ny Fanjakana Ottoman, azo tamin'ny 1877.
Romania amin'ny sarintany Eoropa:
0.1 Lalao an-tserasera amin'ny fiteny Romania
0.2 Lisitry ny Top Sites 10 Romanian Casino Sites
3.0.1 Toe-toerana Romania sy tantara ara-tantara fohy
3.1 Casino sy filokana any Romania
3.2 Casinos amin'ny aterineto any Romania
3.2.1 Ireo mpizahatany ao Bucarest
3.2.2 Zava-baovao mahaliana momba an'i Romania sy ny Romaniana
3.2.3 Romania amin'ny sarintany Eoropa: